Ogoow Sababta Xilkii Looga Qaaday Wasiirkii Waxbarshada Dowladda Federaalka – Kalfadhi
Ogoow Sababta Xilkii Looga Qaaday Wasiirkii Waxbarshada Dowladda Federaalka
Digreeto kasoo baxday xafiiska raysulwasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 26-ka Luulyo 2018 waxaa xilkii wasiirnimo laga qaaday wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada mudane C/raxmaan Daahir Cusmaan.
Wareegtadan kasoo baxday xafiiska raysulwasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa xilkan in uu sii haynayo lagu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada mudane C/raxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir.
Warbaahinta dowladda waxaa digreetadaas ka akhriyay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Xildhibaan Aadam Isaaq Cali.
Xilka qaadistiisa ayaana ayaana salka ku heysa hadal uu warbaahinta siiyay wasiirku kaas oo ahaa in wasaaraddiisu aysan aqoonsaneyn jaamacada dalka.
Sida ila wareedyo sheegayan ka hor xil ka qaadista wasiirka waxaa jiray cadaadis kaga imaanayay madaxda sare gaar ee dowladda, waxaana cadaadiskaas la xariiray in uu ka laabto hadalka uu dhahay.
Intaas kaddib, wasiirka ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta dowladda mar kale ku sheegay in aysan jirin qiimeyn sax ah oo dowladdu marsiisay jaamacadahaas illaa ay marsiiyaan shuruudo u dagsanna aysan u aqoonsan karin jaamacado rasmi ah.
Hadalkaa uu markale ku adkeystay wasiirka ayaa sabab u noqotay in uu waayo xilkiisii.
Kulankii saddexaad: Sidee bay Aqalka Sare go’aan uga gaareen DP-World